Apple Mahazo Tuplejump, orinasa mianatra sy artifisialy artifisialy | Vaovao IPhone
Vao tsy ela akory izay i Apple dia nahazo ny orinasan'ny fianarana milina fahatelo nanomboka tamin'ny 2015, ny fividianana ilay orinasa monina ao India, Tuplejump. Tuplejump dia mifantoka amin'ny fanatsorana ny teknika fitantanana angona ary ny famoronana fitaovana hanamorana ny fiatrehana data maro.
Sombiny iray avy amin'ny tranokala efa tsy mandeha intsony Tuplejump:
Taona vitsivitsy lasa izay dia tsapan'ny olona fa lasa tsy azo saro-pantarina ny habetsaky ny angona ateraky ny orinasa. Teknolojia vaovao no nitazona io angon-drakitra marobe io nipoitra. Izahay dia iray tamin'ireo voalohany nampiasa ireto teknolojia 'data-big' ireto. Orinasa Fortune 500 dia manampy amin'ny fampiasana haingana ireo haitao ireo, ary tsapanay ny fahasarotan'ny fahazoana azy sy ny faran'izay tsotra azony natao.
Nanomboka ny fikatsahanay ny hanamora ny teknolojia fitantanana angon-drakitra ary hanaovany azy ireo ho tena mora ampiasaina. Manangana teknolojia mora ampiasaina izahay, azo ovaina ary hamela ny olona hametraka fanontaniana sarotra amin'ny angona lehibe.
Araka ny TechCrunch, Apple dia nividy Tuplejump tamin'ny "FiloDB" tetikasa loharano misokatra natao hampiasa ny hevitra momba ny milina sy ny fanadihadiana amin'ny angon-drakitra marobe ary amin'ny fotoana tena izy. Toa hitohy ho tetikasa loharano misokatra ny FiloDB.
Apple dia nanamafy ny fahazoana an'i Tuplejump tamin'ny fanambarana mahazatra: “Apple dia mividy orinasa teknolojia kely kokoa indraindray, ary matetika izy ireo dia tsy miresaka momba ny tanjontsika na ny drafitray.
Ny fividianana fianarana milina hafa tato ho ato dia ahitana an'i Perceptio sy Turi. Apple dia mampiasa teknikan'ny fianarana milina manerana ny rafitra miasa, ny fampiasana ny haitao ho an'ny endri-javatra toy ny fanekena ny tarehy amin'ny sary, ny fomba "Portrait" vaovao amin'ny iPhone 7 Plus, fanatsarana lehibe Siri, ary maro hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Apple dia nahazo an'i Tuplejump, orinasa iray mianatra sy manampahaizana artifisialy
Apple dia mieritreritra ny hanokatra fivarotana antsinjarany any Korea Atsimo